Manchester City vs Burnley… (Citizens oo hoggaanka la wareegi karta iyo Martida oo raadineysa guusheedii ugu horreysay ee…) – Gool FM - Idman news
Manchester City vs Burnley… (Citizens oo hoggaanka la wareegi karta iyo Martida oo raadineysa guusheedii ugu horreysay ee…) – Gool FM
Mohamoud 1 month ago 3 min read
(Manchester) 16 Okt 2021. Difaacdayaasha horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa galabta kulan ka tirsan horyaalka la ciyaaraya naadiga Burnley.
Man City ayaa horyaalka hoggaankiisa ugu yaraan si ku meel gaar ah u qaban karta haddii ay guuleysato kulanka galabta iyadoo haatan booska saddexaad la fadhisa 14 dhibcood waxayna labo dhibcood ka hooseysaa Chelsea oo kaalinta koowaad kula jirta 16 dhibcood.
Dhinaca kale, Burnley ayaa raadineysa guusheedii ugu horreysay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan iyadoo saddex barbarro gashay afar kulanna la garaacay toddobadii kulan ee ay ciyaartay illaa iyo haatan.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 02:30 Duhurnimo xilliga Geeska Afrika.
Garoonka: Etihad Stadium
Weeraryahanka Manchester City ee Ferran Torres ayaa ciyaartan ku seegayo dhaawac uu garoommada kaga maqnaan doono muddo saddex bilood ah.
Ederson iyo Gabriel Jesus oo Brazil u saftay saacadihii hore ee aroornimadoo Jimcaha xulkooda Brazil kulankii ay is-reeb-reebka Koobka Adduunka la ciyaareen Uruguary ayaa ciyaartan seegaya hase ahaatee, waxaa Pep Guardiola kooxdiisa usoo laabtay Ilkay Gundogan iyo Oleksandr Zinchenko oo dhaawacyo dheer kasoo kabsaday.
Geesta kale, Burnley ayaa weyneysa kabtankeeda Ben Mee kaasoo laga helay Korona Fayras, halka shaki laga gelinayo inay ciyaaraan kulankan Matej Vydra iyo Charlie Taylor.
Nasiib wanaag, kooxda martida ah ayaa maanta heleysa Johann Berg Gudmundsson oo shaki laga gelinayay kulankan iyo Maxwel Cornet oo dhaawac bowdada ah ku seegay barbarrihii Norwich.
Fool Ka Fool:-
Manchester City ayaa 5-0 kaga adkaatay Burnley mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay horyaalka iyo FA Cup oo ka dhacay Etihad Stadium.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Sean Dyche ayaa siddeed guuldarro la kulantay minnin iyo marti is-aragyadii hore, waxay dhalisay kaliya hal gool halka laga dhaliyay 30 gool.
Kooxda Man City ayaa shabaqeeda ku difaacatay garoonkeeda iyadoo horyaalka ku ciyaareysa afartii kulan ee ugu dambeysay iyadoo 5-0 ku adkaatay saddexdii hore.
Citizens ayaa ah kooxda horyaalka ugu difaacashada fiican iyadoo laga dhaliyay kaliya saddex gool, sidoo kalena aanan shabaqeeda la gaarin qaybta hore ee ciyaarihii hore, waxayna wajahday darbooyinka ugu yar oo ah 42 iyo kuwa noqday bartilmaameedka saxda ah ee ugu yar oo gaaraya 10, waana kooxda ugu wanaagsan dhinacyadaas.
Fernandinho ayaa hal kulan u jira inuu noqdo xiddigii labaad ee kasoo jeeda dalka Brazil kaasoo safta 250 kulan oo Premier League ah.
Naadiga Burnley ayaa guul la’aan ah 10 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League iyadoo heysata rikoorka guul la’aanta ugu dheer waqtigan ee afarta heer ee horyaallada Ingiriiska.
Cel-celiska da’da safka naadiga The Clarest ayaa ah 29 sano iyo 39 maalmood, waana safka ugu da’da weyn horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan.
Haddii ay guuleysato Burnley galabta, Macallin Sean Dyche ayaa noqon doona macallinkii labaad ee saddex naadi oo horyaalka difaacanaya garoonkooda kusoo garaaca kaddib Sir Alex Ferguson, waxaana Dyche uu soo garaacay Chelsea 2017 iyo Liverpool xilli ciyaareedkii hore.
Shaxda macquulka ah ee labada koox:-
Previous Leicester City vs Manchester United… (Gool uu dhaliyo Ronaldo oo taariikh kale u sameyn kara) – Gool FM
Next Brentford vs Chelsea… (Maxaa kasoo kordhay xaaladaha Lukaku, James, Kante iyo Silva?) – Gool FM
Pep Guardiola oo ka hadlay mustaqbalkiisa Tababarennimo… (Miyuu doonayaa inuu layliyo koox kale oo Ingiriis ah?) – Gool FM
Kooxda Manchester United oo aaminsan in Macallin Ralf Rangnick uu u soo gacan gelin karo Erling Haaland – Gool FM
Somali mother dies of starvation, amid severe drought – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
13 mins ago Mohamoud
PSF oo soo bandhigtay Ciidamo ay sheegtay in ay kasoo wareegeen Daraawiishta
Dahabshil Group iyo Marina Beach Estate oo galay heshiis dhismooyin casri ah loo…
Sawirro: Madaxweyne Deni oo xarigga ka jaray Hoyga ciidamada Asluubta Puntland ee xaasleyda ah
Somali mother dies of starvation, amid severe drought – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. November 28, 2021
PSF oo soo bandhigtay Ciidamo ay sheegtay in ay kasoo wareegeen Daraawiishta November 28, 2021
Dahabshil Group iyo Marina Beach Estate oo galay heshiis dhismooyin casri ah loo… November 28, 2021
Sawirro: Madaxweyne Deni oo xarigga ka jaray Hoyga ciidamada Asluubta Puntland ee xaasleyda ah November 28, 2021
Daawo: Ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland oo u goostay dhanka PSF iyo wararkii ugu dambeeyey November 28, 2021